China Afọ Pee ihe nkiri anwụ na-acha iche iche na ihe nrụpụta | Yuancheng
FOB Ahịa: US $ 1 - 10.00 / Ibe
Min.Order ibu: Iberibe 3000
Tụkwasịnụ Ikike: 100000 iberibe kwa ọnwa
Ihe: 200gsm afụ + agba na-agbanwe agbanwe Pee ihe nkiri
Agba: acha anụnụ anụnụ
200gsm afụ + agba na-agbanwe agbanwe Pee film anyanwụ ndo na katuunu ụkpụrụ
Ibu (iberibe) 1000 - 3000 5000 - 10000 15000 - 20000 > 20000
Est. Oge (ụbọchị) 20 30 40 Ndi kpakorita
Ihe nkwakọ ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa gụnyere: 1 x Igwe Igwe Igwe Igwe ihu, 2 x Nkochi Ncha
kaadị kaadị + OPP akpa, 100pcs / ctn,
ctn nha: 62 * 55 * 67cm
1. Ngwaahịa ga-eji nwayọọ nwayọọ gbanwee agba mgbe okpomọkụ karịrị 25 ogo.
2. O na-eme ka okpomoku rịa elu, ọ na agba ọsọ ọsọ.
3. Mụrụ agba na ụkpụrụ nwere ike ahaziri dị ka ndị ahịa chọrọ.
Pee afụ Car Sunshade, na mpịachi silvering reflective afụ, na-echebe ụgbọ gị si UV mebiri. Anyị na-enye ndozi windo Car, yana imepụta oge na-eduga ngwa ngwa. Ezigbo ego dị na ọnụ ọgụgụ buru ibu.
Pee Afọ ahaziri ụgbọ ala anyanwụ ndo Logo obibi ụgbọ ala windo sunshade ụgbọ ala anwụ anwụ
- Pee afụ sunshade Kwesịrị ekwesị maka Front na Rear Windshield
- A na-eji ọlaọcha na-egbuke egbuke na-afụ ụfụ na-acha odo odo
- Igwe ihu windo ihu n’azụ dabara SUV niile, gwongworo, ụgbọ ala, na ụgbọala nwere windshi windo
- Foldable Car sunor visor dị mfe iji wụnye ma wepu.
- Silver afụ sunshade chebe ụgbọ gị
Guzosie ike na 1999, Yuan Cheng Auto Ngwa Manufacturer Co. Ltd .. bụ a pụrụ iche na emeputa na ekspootu maka akpaaka ngwa, ekpuchi zuru akara nke ụgbọ ala anyanwụ (snow) shades, ụgbọ ala oche mkpuchite, ụgbọ ala oche cushions na n'iru wheel mkpuchite.
Na ike R & D ìgwè, nlezianya QC usoro na zuru ezu mmepụta & nnyocha akụrụngwa, anyị na ngwaahịa na-ere ná mba ọzọ ihe karịrị 30 mba, tumadi na Europe, North na South America, na Middle East na Southeast Asia.
Na ihe karịrị afọ 20 'ahụmahụ na ụlọ ọrụ nke akpaaka ngwa, Zhejiang Yuancheng nweela a otutu aha si ahịa n'ụwa nile.
Facilitylọ ọrụ anyị kwadebere nke ọma gụnyere ọ bụghị naanị akwa ịcha akwa laser, igwe lamination, igwe mgbatị maka imepụta, kamakwa igwe nyocha 3D dị elu, digitizer, fogging test, onye na-agba ọkụ na-agba ọkụ, okpomọkụ na-agbanwe agbanwe, ihe nyocha abrasion na spectrophotometer maka ụlọ nyocha. N'ihi ngwa ngwa dị elu, anyị nwere ike ịchịkwa mma nke akụrụngwa na ngwaahịa. Ngwaahịa anyị niile na-agbaso ụkpụrụ ụkpụrụ mba ụwa, dịka REACH, ROHS, CE, 7P wdg.
Nke gara aga: EPE ụfụfụ anwụ na-acha SS-61501 / 2/3/4/27
Osote: Laser film ahaziri anyanwụ ndo SS-61520/24
Car Side Window Anyanwụ Sun
Car Sun Shade n'èzí
Ihu Igwe Igwe Igwe Na-atọ ọchị
N'ime Car Sun Shade
N'èzí Sun Shade
Nkọwapụta Ngwaahịa: Aha aha: Car Sunshade, Windshield sun shadow, Auto / Car Front car sunshade Style: Sunshade Front. Styledị ndị ọzọ maka nhọrọ: N'azụ Sunshade, Akụkụ windo nke sunshade Ihe: White tyvek, Ihe ndị ọzọ maka nhọrọ: Pee ụfụfụ, Pee Bubble, naịlọn, Nylon ntupu Size: 150 * 70cm, ahaziri nha nke a na-anakwere Mbipụta: Silk ihuenyo obibi, ikpo-nyefe mbipụta Ngwugwu: 1pc / opp akpa, 50-100pcs / katọn Function: 1. Chebe ụgbọ ala si UV, Nọgidenụ ụgbọ ala na jụụ, ...
Car Wine oyi, Obere igwe oyi 12v, Mako Car oyi, 12v Car Igwe nju oyi oyi, Carlọ Ulo Ugbo Ala, Kpuchie N'okpuru Car,